Abanye - Ama-Absolut Viajes | Ukuhamba kwe-Absolut (Ikhasi 2)
Kunezindawo ongahamba kuzo kumazwekazi amahlanu kuphela. Siphakamisa izindawo ezinjengeVietnam, iPeru, iNew Zealand, iCanada noma iKenya.
Yini ongayibona eSenegal
Uma uzibuza ukuthi uzobona ini eSenegal, kufanele wazi ukuthi ingelinye lamazwe amahle kakhulu futhi amukelayo kuyo yonke iNtshonalanga Afrika.
ISri Lanka, eyaziwa njengeTear of India, ikunikeza izindawo ezinhle kakhulu, amabhishi amahle nezikhumbuzo zasendulo.
Amadolobha amahle kakhulu eYurophu
Amadolobha amahle kakhulu eYurophu akunikeza umlando omningi, izikhumbuzo ezingavamile ozibonayo namapaki amahle ongawathokozela.
Uyazi ukuthi yini okufanele uyibheke ukuqasha indlu yasemakhaya enesiqinisekiso? Lapha sinikeza ezinye zezeluleko ezinhle okufanele uzilandele kulezi zimo.
Ukuhamba ngesikebhe kweMedithera kukuvumela ukuba wazi amadolobha amakhulu aseningizimu yeYurophu ngazo zonke izimangaliso zawo zemivubukulo nezikhulu.
Izinto okufanele zenziwe eMaldives
Uma uzibuza ukuthi wenzeni eMaldives, sizokutshela ukuthi inezikhumbuzo kanye ne-gastronomy ehlukile, kepha ngaphezu kwakho konke ubuhle bemvelo obumangalisayo.
Yini ongayibona eLapland
Uma uzibuza ukuthi uzobona ini eLapland, sizokutshela ukuthi unezibani ezinhle zasenyakatho, kepha futhi uphupha namathafa endlu ngisho nendlu kaSanta Claus.
Ucabanga ngalolo hambo lokuya e-honeymoon? Hhayi-ke manje ungazihlelela nokwakho. Lapha sikutshela ukuthi kanjani futhi lonke ulwazi oludingekayo.
Ukuya eBali e-Indonesia ukwazi umhlaba ohluke kakhulu kowethu. Kepha futhi vakashela indawo yemvelo enhle nezikhumbuzo ezihlukile.
IBruges yaseBelgium inesikhungo esihle somlando esiyiNdawo yamaGugu Omhlaba futhi inezakhiwo ezihlukile emhlabeni.
IHelsinki idolobha eligcwele umlando, izikhumbuzo kanye neminyuziyamu. Kepha futhi nge-gastronomy esihlwabusayo kunalokho okulindele.
IKrakow ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eYurophu. Uzothola kuwo ifa elicebile lesikhumbuzo, i-gastronomy enhle kakhulu nabantu abamukelayo.
Futhi ngenzani ngendiza yami? Inkinga yomhlaba
Ukungena endaweni yesehlakalo se-coronavirus kuguqula yonke iplanethi ibheke phansi. Amanye amazwe adlulile noma acwilisiwe ...
Imizila emihle yezitimela eYurophu
Ngaphandle kokuthi indiza iseyindlela yokuhamba esetshenziswa kakhulu yiningi labantu, yona ...
Amahhotela ozohamba nezingane
Ngabe uyazi zonke izici nokuthi yimaphi amahhotela afana ngokuhambisana nezingane? Lapha sikukhombisa ukuthi usebenzise amaholide omndeni amahle kakhulu
Izici zamahhotela angenazo izingane
Kunezici eziningi zamahhotela angenazo izingane okufanele wazi. Ngabe ufuna ukujabulela indawo oya kuyo wedwa njengombhangqwana noma nabangane?
Thola indawo yokudlela enamakhasi aphuzi
AmaYellow Amakhasi aqhubeka nokuba yisethenjwa sombuso sokusesha izihambi kanye nochwepheshe banoma yiluphi uhlobo, kodokotela bamazinyo ...
Yini okufanele uyibheke ukuqasha ikharavani
Uma ufuna ukuqasha ikharavani, kufanele ubheke uchungechunge lwezinyathelo eziyisisekelo, ukuze konke kuhambe kahle futhi ukwazi ukujabulela iholide lakho.
Izindawo ezishibhile zokuhamba eYurophu
Ngabe ucabanga ukuya eholidini futhi awufuni ukuchitha imali eningi? Bhala phansi lezi zindawo ezingabizi kakhulu ukuhamba eYurophu futhi ujabulele ukuphumula kwakho.
Ikhithi yokusinda ohambweni lwakho: Yini ongeke uyiphuthe
Ngabe ufuna ukuhamba futhi awazi ukuthi uzoyiqala ngaphi ipotimende lakho? Bheka ikhithi yethu yokusinda ohambweni lwakho futhi ungashiyi lutho ekhaya.
IKomodo National Park
Isendle futhi engahlanjululwa, iKomodo National Park yase-Indonesia iyipharadesi elidume ngokuba khona kwesibankwa esikhulu kunazo zonke emhlabeni.
Ungakugwema kanjani ukukhohliswa lapho uqasha ifulethi
Kufanele ugweme ukukhohliswa lapho uqasha ifulethi ngeholide lakho lasehlobo. Ngakho-ke, akukho okufana nokulandela uchungechunge lwezeluleko ezilula esiziphakamisayo
Ukuhamba ngendiza nezingane
Ukuhamba ngendiza nezingane kungaba nzima kakhulu kunokuba sicabanga. Kepha singahlala sisebenzisa uchungechunge lwezeluleko eziyisisekelo.
Ungalihlela kanjani iholide lomndeni
Ukuhlela iholide lomndeni akulula ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, sethula uchungechunge lwezinyathelo okufanele sizithathe. Simple futhi ezingokoqobo!
ILake Bled: Inganekwane yokuvakashela iSlovenia
Uma uvakashela iLake Bled eSlovenia uzothola umhlaba womlingo nowemvelo ofanele inganekwane enhle yaseYurophu.
Umshuwalense wokuhamba njengomndeni, induduzo ngamaholide akho
Umshuwalense wokuhamba komndeni uhlale uyindlela enhle. Sizothola ukuthula kwengqondo sibonga izinzuzo zayo ngendlela yokumbozwa.
Yini ongayibona eVictoria Falls
Uma ufuna ukuzilahlekisela kwesinye sezimangaliso ezinkulu zemvelo zomhlaba, iVictoria Falls iba ukutholakala okuthakazelisa kakhulu.
Ukuvakashela amathempeli e-Angkor eCambodia
Ukuvakashela amathempeli e-Angkor eCambodia kusho ukungena kwenye yezakhiwo ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Zitholele!
Yini ongayibona eSofia
Uma ubuzibuza ukuthi uzobona ini eSofia, sikulethela uchungechunge lwamakhona nezindawo ezisemqoka okumele uzivakashele kulolu hambo olungasoze lwalibaleka.
Kunezindawo eziningi zokubalekela kwezothando esingakhetha kuzo. Sikhethe lezo ongazivakashela ngendlela yokuphunyuka esheshayo.
Izinzuzo zokubhuka uhambo kusengaphambili
Kunezinzuzo eziningana zokubhuka uhambo kusengaphambili nokuthi kufanele wazi. Uzobona ukuthi ngale ndlela ungalijabulela kanjani iholide lakho kakhulu.
Ingabe kufanelekile ukuthatha umshwalense wokukhansela uhambo?
Ingabe kuwufanele ukuqasha umshwalense wokukhansela uhambo? Namuhla sikunikeza impendulo futhi sikutshela ukuthi imayelana nani nokuthi ikuphi ukumbozwa.
Namuhla sithatha uhambo olukhulu lokuhamba ngezinyawo kulokho okubizwa 'ngeNdodakazi kaMosa' noma eyaziwa ngeDinant. Thola ukuthi yini ongayibona eDinant, eBelgium, nasemakhoneni ayo amahle.
Ungaphuthelwa yilokhu kuhamba ngalokho ongakubona eWarsaw. Uzowajabulela lawo makhona omlingo, okuyisa emlandweni nasemasikweni alo.
I-Kuala Lumpur Petronas Towers: Kusuka Ekuphakameni kweMalaysia
IPetronas Towers eKuala Lumpur akuyona nje kuphela yezimpawu ezinkulu zaseMalaysia kepha ukunqoba kwase-Asia kusekelwa ngamasiko nobuchwepheshe.
Izinhlelo zempelasonto njengezithandani
Kusukela esimisweni se-spa kuya ekulahlekeni emadolobheni amahle, lezi zinhlelo zempelasonto njengezithandani zizokunqoba. Usukwenzile konke?
Amabhishi amahle kakhulu eThailand
Ukukhethwa kwamabhishi amahle kakhulu eThailand, lapho uzochitha khona izinsuku nobusuku obuhle kakhulu bokuhlala kwakho. Ukunikezwa okubanzi kwakho konke ukuthanda.
Ukuhamba kuphi ngo-Okthoba
Thola ukuthi uzohambela kuphi ngo-Okthoba. Izindawo ezifanele, ezinamazinga okushisa amahle nezinto eziningi ongazithola. Ungacabangi kabili!
I-Mekong Delta: ezansi nomfula ngokusebenzisa indawo eshisayo yaseVietnam
Izihlahla zikakhukhunathi, amasimu abanzi erayisi noma amadolobhana antantayo alinde eDekeni leMekong elivusa umlingo nokungajwayelekile kweVietnam. Ngabe uyafuna ukuyazi?
Izindiza ezingayi ndawo, zisebenza kanjani?
Siveza izinzuzo zezindiza ezingafiki lapho siya khona, ngasikhathi sinye lapho sikutshela ukuthi zisebenza kanjani nokuthi ungazitholaphi izivumelwano ezinjengalezo.
I-Game of Thrones Maps
Sibuyekeza ezinye zezindawo ezibaluleke kakhulu ku-Game of Thrones. Izindawo ezihlukile esizibonile kulo lonke lolu chungechunge.
I-Bran Castle noma i-Dracula's Castle ingesinye sezindawo zokuphoqeleka eRomania. Indawo enobuhle obuningi nezinganekwane ngemuva kwayo.
Ukuhamba kuphi ngoSepthemba
Ungaphuthelwa yilokhu kukhethwa kwezindawo ozozihambela ngoSepthemba ezizokumangaza. Uzothola izindawo ezihlukile zokujabulela leyo nyanga!
Izizathu zokuhamba ngaphandle kwamapotimende
Ukuhamba ngaphandle kwamapotimende sekuwumqondo omuhle. Uma ungakaqiniseki, thola izinzuzo zayo ezinkulu nezizathu zohambo olujabulisa kakhudlwana.
Lapho ongabona khona iLights Lights
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungabona kuphi iLights Lights, sikushiya namaphuzu amahle kakhulu lapho ungathokozela khona lesi simo esihle semvelo.
Uma indawo oya kuyo elandelayo iziQhingi zeFiji, sizokunikeza lonke ulwazi oludingayo ukuze wenze lolo hambo lube ngaphezu kokungalibaleka. Kusuka kokufanele ukwenze kulezi ziqhingi, kuya kumanani nakuleyo mininingwane enentshisekelo esiyidinga kakhulu. Ingabe siyapakisha?
ITanna, isiqhingi esingaqondakali oLwandlekazi iPacific
ITanna itholakala ePacific Ocean. Ingesinye seziqhingi eziningi ezakha iziqhingi zaseVanuatu. Kepha ngaphandle kokungabaza, une-quirks enhle ongayithola. Kumayelana nesiqhingi esingaqondakali uJules Verne asitshela ngaso ngaleso sikhathi. Ngabe ufuna ukungena kukho?
Yini engingaletha ngayo umthwalo wesandla?
Lapho singafuni ukulinda imigqa emide ukuze singene, umthwalo wezandla uba umlingani wethu omkhulu. Kepha yebo, kufanele ngaso sonke isikhathi sizazise kahle ukuthi yini esingayiphatha nokuthi yini esingayithwali. Ngakho-ke, namuhla sisusa konke ukungabaza okukhathaza ikhanda lakho.
Amabhishi amahle kakhulu emhlabeni
Sikukhombisa amanye amabhishi amahle kakhulu emhlabeni lapho ungathola khona izindawo eziyingqayizivele nezomlingo, ezizungezwe yimvelo futhi empeleni, ubuhle obuningi. Uke waba kunoma ikuphi kwalokhu esikhulume ngakho? Bakufanele ukujabulela kanye empilweni.
Sihambahamba phakathi kwezingwadule ezaziwa kakhulu esikrinini esikhulu. I-Wadi Rum bekuyisizinda sama-movie afana ne- "Lawrence of Arabia" futhi ifihla izimfihlakalo eziningi kanye nezifiso ezifanele ukuphila, kanye empilweni.
Ukuhamba mahhala njengevolontiya
Thola ukuthi ungahamba kanjani mahhala njengesisebenzi sokuzithandela emhlabeni wonke. Okuhlangenwe nakho okucebisa kakhulu wena nekusasa lakho.
Thola iLeuven: Ingxube yesiko, isiko nempilo eningi. Ama-Nook nezikhumbuzo ezigcwele ubuhle ongazibona lapho ubalekela.
Yini ongayibona eBratislava
Ungaphuthelwa yilokho ongakubona eBratislava. Inhlokodolobha yaseSlovakia inamakhona amaningi akhombisa lapho ubuciko buhlangana khona nenganekwane nomlando.
Ungahlela kanjani emhlabeni jikelele
Uma ufuna ukwazi ukuthi uluhlela kanjani uhambo lokuzungeza umhlaba, ungaphuthelwa izeluleko ezinhle kakhulu zamalungiselelo esikushiyela wona namuhla.
Amathiphu wokuhamba eshibhile
Sikushiya amathiphu amahle kakhulu wokuhamba ushibhile. Izinyathelo ezincane okufanele sizicabangele uma sifuna ukonga ngaphezu kwalokho esingakucabanga.
Yini ongayibona eMalta
Ungaphuthelwa yilokho ongakubona eMalta. Ukuvakasha kweziqhingi zayo eziyinhloko, kanye nemizi yayo egcwele ingcebo enkulu yokwakha namasiko
Umhlahlandlela we-Backpacker oya eThailand
Uma uhamba ubhaka ubuya eThailand ungaphuthelwa umhlahlandlela wethu lapho sikufundisa ukuthi yini okufanele uyiphathe, ukuthi ungahamba kanjani, ukushintshaniswa kwemali namanye amaqhinga
ISal Island, eCape Verde: isiko leNo Stress
Isiqhingi saseSal, eCape Verde, siyipharadesi eligezwe elinye lamabhishi amahle kakhulu e-Afrika futhi kuhlala abantu abafudumele nabanomoya wokungenisa izihambi.
Umehluko phakathi kwamahhotela asemadolobheni nasemaphandleni
Labo abangazi ukuthi yini ezokuvakasha zasemakhaya imvamisa bayazibuza ukuthi yini umehluko phakathi kwendawo yokuhlala yasemakhaya ...